> Resource> Video> otú mix HD na SD Video Files
Mgbe ụfọdụ nwere ike ị chọrọ mix ma ndị HD (High Definition) na SD (Standard Definition) video faịlụ n'ime a zuru ezu otu. Iji nweta ya mere, ihe dị mfe na-eji na elu-àgwà video igwekota bụ ihe dị gị mkpa.
Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) dị otú ahụ a usoro. Ọ na-enyere gị aka mix HD na SD video faịlụ seamlessly na ịzọpụta dechara faịlụ na fọrọ nke nta niile video formats. N'ihi na ndị na dị nnọọ mix HD na SD video faịlụ maka ọkụ a DVD mgbe e mesịrị, a usoro bụ nnọọ nhọrọ kasị mma na nke a. Ọ na-ahapụ unu kpọmkwem ọkụ a ọhụrụ DVD diski (DVD nchekwa, ISO, IFO faịlụ gụnyere) mgbe ị na mix faịlụ ọnụ n'ụzọ zuru okè.
Ugbu a budata ma wụnye ya mbụ. Na mgbe ahụ na-eso nzọụkwụ-site-nzọụkwụ nkuzi n'okpuru mix gị HD na SD faịlụ seamlessly.
1 mbubata gị faịlụ ka usoro iheomume
Mgbe wụnye na-agba ọsọ a video igwekota, ịhọrọ site na "16: 9" ma ọ bụ "4: 3" ruru ọnụego dị ka gị mkpa. Mgbe ahụ see "Import" button mbubata ma nke HD na SD video faịlụ site na kọmputa na-usoro ihe omume. Ma ọ bụ ozugbo ịdọrọ na dobe ndị a lekwasịrị faịlụ site na diski ike gị ka album. Ị ga-achọpụta na ndị a niile kwukwara faịlụ na-depụtara na ebi ndụ nke a usoro, gosiri dị ka ndị a.
2 Na Na Na na HD na SD video faịlụ ọnụ
Ịdọrọ ndị a kwukwara faịlụ site na album ka usoro iheomume na ala nke interface. Mgbe ahụ kpatụ video mkpebi site cropping. Iji mee nke a, nri pịa lekwasịrị faịlụ ma họrọ "n'Ubi". Na mmapụta elu window, ị nwere ike ma ubi na video na 16: 9 ma ọ bụ 4: 3 akụkụ redio ma ọ bụ na aka ubi họrọ ebe dị ka gị mkpa. Pịa "OK" gosi ya na unu ọnọdụ.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ ime ihe na-edezi ọrụ, dị ka bugharia, akuku, gbawara n'etiti video, tinye utu aha, mgbanwe, mmetụta, wdg, biko rụtụ aka na otú dezie video faịlụ >>.
3 mbupụ a zuru ezu video faịlụ ma ọ bụ ọkụ na-DVD
Ịhụchalụ dum video. Ọ bụrụ na ị afọ ojuju na N'ihi ya, pịa "Mepụta" button mbupụ video. Na mmapụta elu window, họrọ bupu usoro. Ọ bụrụ na ị chọrọ mbupụ a ọhụrụ faịlụ, dị nnọọ na-aga "usoro" ma họrọ a na-achọsi ike video format site na listi. I nwekwara ike ozugbo ịkọrọ ya na YouTube ma ọ bụ Facebook ke "YouTube" taabụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọkụ faịlụ a DVD, dị nnọọ gaa "DVD" taabụ, fanye a ide DVD disk, ka a usoro rụchaa ndị fọdụrụ usoro.
Olee otú iji tọghata MP4 ka WebM
Olee otú Download Answer.com Videos na a Click